ओमकार टाइम्स गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर भन्दा साबुनपानी नै ‘हितकर’ – OMKARTIMES
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर भन्दा साबुनपानी नै ‘हितकर’
काठमाडौं – धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन (मेथानल मिश्रित) रहेछ भने के होला ? त्यसमाथि बच्चाको हातमा पर्‍यो भने ? यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
युनिसेफले पनि बगिरहेको पानीमा हात भिजाउने, मनग्गे साबुन लगाउने, हत्केलाको पछाडि, औंलाको बीच र नङलगायत सबै भागमा कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिच्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बगिरहेको पानीमा हात पखाल्ने र सफा कपडा वा एकपटक मात्र प्रयोग गरिने तौलियाले हात पुछ्ने हो भने कोरोना भाइरसको अवशेष नष्ट हुन्छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।